Norton mushumo: Tech rutsigiro chitsotsi ndiyo Nha. 1 yekunyepedzera kutyisidzira
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Norton mushumo: Tech rutsigiro chitsotsi ndiyo Nha. 1 yekunyepedzera kutyisidzira
NortonLifeLock's yepasi rese yekutsvaga timu, Norton Labs, nhasi yaburitsa yayo yechitatu yevatatu Kota Yekuchengetedza Kwekuchengetedza Pulse Report, ichitsanangura pamusoro pevatengi cybersecurity nzwisiso uye kutora kubva munaChikunguru kusvika Nyamavhuvhu 2021. Zviwanikwa zvazvino zvinoratidza hunyanzvi hwekutsigira hunyanzvi, uhwo hunowanzo svika seyambiro yepop-up. inovanzika inonzwisisika ichishandisa mazita uye makambani emakambani makuru ehunyanzvi, ave njodzi yepamusoro kubiridzira kune vatengi. Matekinoroji ekutsigira matsotsi anotarisirwa kuwanda mumwaka unotevera wezororo, pamwe nekutenga uye kurwisana nehukama hune chekuita nerudo.
Norton yakavharira anopfuura mamirioni gumi nemaviri emamiriyoni e12.3 tech tech tsigiro, ayo akawedzera iwo mazita ezvekutyisidzira zvekubiridzira kwemavhiki gumi nematanhatu akateedzana pakati paKurume naSeptember. Kubudirira kwerudzi urwu rwechitsotsi kwakawedzera panguva yedenda nekuda kwevatengi 'kuvimba nekuvimba nemidziyo yavo kubata masystem emahybridi uye zviitiko zvemhuri.
"Matsotsi ekutsigira tekinoroji anoshanda nekuti anobira kutya kwevatengi, kusava nechokwadi uye kusahadzika kuti vanyengere vanogamuchira kuti vatende kuti vanotarisana nekutyisidzirwa kwakanyanya kwekuchengetedzeka," anodaro Darren Shou, mukuru wezve tekinoroji, NortonLifeLock. “Kuzivisa ndiko kuzvidzivirira kwakanakisa kubva pakurwiswa uku kwakanangwa. ”
Norton yakabudirira kuvharidzira vangangoita 860 miriyoni kutyisidzira kweCyber ​​pamusoro pechikamu chakapfuura, kusanganisira mamirioni makumi mana emafaira-based malware, 41 mafaera-e-malware, angangoita mamirioni gumi nemashanu ekuedza kubiridzira uye 309,666 rudzikunuro rwewareware.
Zvimwe zvakawanikwa kubva kuCustomer Cyber ​​Safety Pulse Report zvinosanganisira:
Virtual zvinhu zvemitambo zvine kukosha chaiko: Kazhinji, mu-mutambo zvinhu zvinotsvakwa zvakanyanya uye zvinogona kutengeswa pamisika yepasirese-yepasi. Semuenzaniso, mutambi wevazhinji pamhepo-wekutamba mutambo unobata bhuruu chaiyo "Party Hat," iyo yaive ichangokosheswa kusvika pamadhora mazana matanhatu nemazana manomwe. Norton Labs yakabata mushandirapamwe mutsva wekunyengedza wakanyatsogadzirirwa kuwana zvitambi zvevatambi uye maviri-echokwadi ruzivo rwechinangwa nechinangwa chekuba nekutengesa zvinhu zvakakoshesa zvakadai.
Anonyengera epamhepo emabhangi mapeji anogutsa: Norton Labs vaongorori vakaona punycode phishing mushandirapamwe wakanangana nevatengi vebhangi nekomboni kabhoni yeiyo chaiyo rebhangi peji rekuvanyengedza kuti vapinde magwaro avo.
Makadhi echipo akaba (anenge) akanaka semari: Kunyanya sezvo zororo raswedera, vatengi vanofanirwa kuziva kuti makadhi echipo ndiwo anonyanya kutarisirwa kune vanorwisa nekuti ivo vanowanzove nekuchengetedzeka kwakaderera kupfuura makadhi echikwereti uye havana kusungirirwa kune rimwe zita remunhu. Uyezve, akawanda makadhi echipo anogadzirwa nekambani imwechete ine 19-manhamba manhamba uye 4-manhamba PIN. Varwisi vanoshandisa mawebhusaiti akarongedzerwa kutarisa muyero wekadhi rechipo kuti vaone kiredhiti kadhi inoshanda uye pini musanganiswa, zvichivapa mukana wakazara wemari.
Vabiridzi vanoramba vachinangisa kuChechi yeRoman Catholic neVictoria: Tsvagurudzo yeNew Norton Labs inoratidza vabiridzi, vanogona kushanda kunze kweChina, vanga vachinongedzera Kereke yeRoman Catholic neVictoria. Mune imwe nyaya, vaongorori vakawana yakanangana nemarware mumafaira anoita kunge ari zvinyorwa zvine chekuita neVatican asi zvichikanganisa zvishandiso zvevashandisi vanowana magwaro. Mune chechipiri chiitiko, makomputa ari muVatican akawanikwa aine malware akaiswa. Nepo rudzi urwu rwekurwiswa kwakanangana kazhinji kunosanganisirwa nemasangano makuru, vanhu vemapoka akasarudzika, vanopokana kana vanhu vane mabasa ane simba vanogona zvakare kusangana nekurwiswa kwakafanana, uye vatengi vese vanofanirwa kugara vakasvinura vachirwisa mishandirapamwe yekubiridzira uye mapeji ehutachiona.